एमाले–माओवादीबिच एकले अर्कालाई ठग्ने घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाको सम्बन्ध हो : डा. बाबुराम भट्टराई - Enepalese.com
इनेप्लिज २०७४ मंसिर ४ गते २३:३१ मा प्रकाशित
बाबुराम भट्टराई एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष र नेपालको ३५ औ प्रधानमन्त्री हुन् । संविधान सभामा सबैभन्दा बढ्ता मत र मतअन्तरले जित्ने माओवादी सभासद् डा.बाबुराम भट्टराईले कांग्रेसका प्रत्यासी आफ्नै मामा पर्ने चन्द्रप्रसाद न्यौपानेलाई ४० हजारको अन्तरले हराएका थिए । उनले द नेचर अफ अण्डरडेभलपमेन्ट एण्ड रिजनल स्ट्रक्चर अफ नेपाल विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । अर्थमन्त्री हुँदा राम्रो काम गरेर प्रशंसा कमाएका भट्टराई संविधान जारी भएलगत्तै माउ पार्टी परित्याग गरेर नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरे । यसपटकको प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उनी गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट चुनाव लड्दैछन् । देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्छ भनेर जनतामाझ गएका भट्टराई कांग्रेसको सहयोगमा माओवादीको उम्मेदवार नारायणकाजी श्रेष्ठसँग चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । उनै भट्टराईसँग पत्रकार ऋषि धमलाले अन्तरवार्ता लिएका छन् । उनीसँगको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
२ वटा चुनावमा यही क्षेत्रबाट कांग्रेसलाई पराजित गर्नुभयो ।
अहिले कांग्रेससँग मिलेर नारायणकाजीविरुद्ध चुनावमा उत्रदा अप्ठ्यारो हुँदैन ?
नारायणकाजी श्रेष्ठ तपाईको सहयोद्धा त हो नि ? उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा अप्ठ्यारो हुँदैन ?
यसो नभन्नुस् न । उहाँसँग प्रतिस्पर्धा नै होइन । गोरखाली जनताले मबाट जुन अपेक्षा गरेका छन्, मैले इमानदारिताका साथ सेवा गरेको छु । अहिले पनि जनतको दैलोमा गएर सोध्नुस्, बाबुरामलाई उहाँहरुले कसरी बुझ्नुहुन्छ ? मैैले उहाँहरुकै आंकाक्षा बुझेको छु । मेरो प्रतिस्पर्धी को हुन्छ भन्ने कुरा ठूलो होइन ।
त्यो त उहाँहरुको स्वतन्त्रताको कुरा हो । तर कम्युनिष्ट सिद्धान्त र आदर्श उहाँहरुले पालना गर्नुभएको छैन । त्यसैले उहाँहरुलाई कम्युनिष्ट पार्टी भन्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन । कम्युनिष्ट भन्ने तर अरबौँको कमिसनखोरीमा लिप्त हुने ? गरिब किसान मजदुरको नाममा अकूत सम्पत्ति थुपारेर भ्रष्टाचारको दलदल सृजना गरेर आफूलाई कम्युनिष्ट भन्न सुहाउँदैन । अब विगतमा जस्तो कम्युनिष्ट र कांग्रेस भन्ने कुराबाट माथि उठेर राजनीतिक बहस गर्नु जरुरी छ । नयाँ शक्ति पार्टी त्यो विकल्प दिन चाहन्छ ।
चुनावी तालमेलमा भागबण्डा नमिलेर छोड्नुभएको होइन ? वाम गठबन्धनका नेताहरुले त त्यही भनिरहेका छन् ?
किन छैनन् जनता ? गोरखामा आएर हेर्नुस् । हामीले भर्खर रोपेको विरुवा रातारात ठूलो रुख त कसरी बन्छ र ? यस्तो परिकल्पना गर्नुभयो भने त्यो गलत हुन्छ । तर यति छोटो अवधिमा देशका ७७ वटै जिल्लामा संगठन र संजाल बनेको छ । सबै जिल्लाहरुमा उम्मेदवारुहरु उठाएका छौँ । यो पटक राष्ट्रिय पार्टी बन्छौँ र अर्कोपटक देशको नेतृत्व गर्ने पार्टी बन्छाँै ।
बाबुराम भट्टराई नेपाली राजनीतिमा एक्लो वृहस्पती बनेको हो ? भविष्यमा तपाई प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ ?